Indawo yokuhlala yeHolo yeDolophu -indawo yokupaka yabucala - A/C - I-Airbnb
Indawo yokuhlala yeHolo yeDolophu -indawo yokupaka yabucala - A/C
Staré Mesto, Košický kraj, Slovakia
Indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo yonke sinombuki zindwendwe onguMartin
Kutheni uhlala kwigumbi lehotele elicwebileyo, xa unokonwabela indawo epholileyo-ebekwe ngokugqibeleleyo ekhaya-kude-nekhaya kwindawo yakho emangalisayo yokuhlala eKosice ngexabiso elihle entliziyweni yeKošice - isixeko esidala, amanyathelo asuka kwiindawo zokutyela ezilungileyo, iimyuziyam kunye neepaki! Uyakwazi ukupaka iimoto ezi-2 simahla kwindawo yokupaka yabucala. Awunakuyifumana indawo engcono yokuhlala kwakho eKosice.
✔ iimbono zeziko lembali laseKosice ukusuka kwi-terace yethu
✔ i-atrium egcwele uhlaza kwintendelezo yesakhiwo
✔ ulwakhiwo olunamandla kakhulu -ikati. "B"
Kutheni uhlala kwigumbi elincinci lehotele ngexesha lokuhlala kwakho eKosice? Ikhaya lam langoku elinomtsalane linokuba lelakho!
Imi ngokugqibeleleyo eKosice - isixeko esidala, kwisitalato iStrojárenská. Iflethi inikezela ngezimvo ezikhethekileyo zeziko lembali leKošice nazo zonke iimpawu zayo zomhlaba. Eyona ndawo ilungileyo kwi towvn - oko kuthetha ukuba uhamba kancinci KAKHULU ukuya kwiziko lembali eligcinwe kakuhle (imizuzu emi-2), iSt Elizabeth Cathedral - icawa enkulu yaseSlovakia (imizuzu eyi-6), izakhiwo ezininzi ezikhuselweyo zamafa eGothic, Renaissance. , iBaroque, kunye nezitayile zeArt Nouveau. Ngokumalunga neHolo yeDolophu endala. Kufuphi kakhulu kwindawo yabahambi ngeenyawo echumileyo eneendawo zokutyela ezininzi, iikhefi kunye neendawo zokutyela ezininzi.
Igumbi elinye lokulala elinelanga, elinebhedi elingana nokumkanikazi kunye negumbi lokuhlala elitofotofo elinesofa yabantu ababini, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokuhlambela elinye eligcweleyo, ipaseji ende, kunye nazo zonke izixhobo kunye ne-intanethi onokuyidinga. Ikumgangatho we-7 (Ukususela kwi-8th) ngombono omangalisayo, kwisakhiwo esifanayo njengevenkile enkulu-evula yonke imihla ukusuka ngo-7 ukuya kweyesi-9. Indlu ine-elevator efanelekile nakwiindwendwe ezindala. Isakhiwo esizolileyo, esikhuselekileyo, esinabamelwane abalungileyo. Ukupaka okulula nokukhuselekileyo kweyakho iimoto ezi-2. Uyakwazi ukupaka simahla kwiindawo zethu zabucala kwigaraji. Iflethi ikwisakhiwo esonga amandla aphezulu.
Indawo yokuhlala yayinokulala ukuya kutsho kwezine, kodwa ndikhetha ukuyigcina kwisibini okanye intsapho enye.
Zonke iintengiselwano ziphathwa ngenkqubo ekhuseleke kakhulu ye-AirBnB.
Le ndlu ilula, ayinangxaki, inobunewunewu, indawo efanelekileyo yokumisela iKosice eyoyikekayo yokuhlala!
Yonwabela eyona Kosice inokunikela!
Ukuqenelela okuhle kakhulu,
PS - Izaphulelo zinokwenzeka, ngakumbi ngokuhlala ixesha elide.
Ngelixa ndihlala ekhayeni lam, iindwendwe zam zikonwabela ukusetyenziswa kwayo yonke into ekwiflethi! Ewe, idilesi yam ibekwe ngokugqibeleleyo ukunika ukufikelela kuyo yonke into esi sixeko sikhulu esinokubonelela, ngeenyawo, ngetram, ngebhasi, iteksi...kunye nerenti yebhayisekile.
Ndiyakuthanda ukubulisa iindwendwe zam xa ndifika, kwaye ndibavalelise kakuhle ekuphumeni. Ndihlala ndifumaneka ukunika isikhokelo okanye uncedo ngexesha lokuhlala kwabo, kodwa abantu abaninzi ngoku bazi ngqo apho bafuna ukuya khona, kunye nento abafuna ukuyenza, kwaye ndiva kuphela kubo xa benxibelelana nam ukwenza ubhukisho kwakhona kulo nyaka uzayo. !
Ubumelwane bam bulungele iintsapho, izibini eziselula, abadla umhlala-phantsi, kunye nabahambi beshishini, kunye neendawo zokutyela ezininzi ezimangalisayo nezahlukeneyo kunye nee-pubs; Iposi ( 10 imiz), iiarhente zeemoto ezirentwayo, ubonelelo lweofisi, kunye neevenkile zezipho, iithiyetha bhanya-bhanya, Ithiyetha, i-gourmet delis, iivenkile ezinkulu, kunye neekhemesti. Kufuphi neSibhedlele seDyunivesithi, kwindawo ejongene neholo yedolophu endala.
Umnyango wam ziibhloko ezimbalwa ukusuka kwisiXeko esiDala sembali. IiTram zihamba kwiSitalato saseKomenskeho, isitalato saseHviezdoslavova, iCsa.street (1 min). Izitrato zixakekile ziiteksi iiyure ezingama-24 ngosuku!
Ndisebenza nzima kakhulu ukugcina ikhaya elitofotofo, elicocekileyo, kunye nelamkelekileyo kwiindwendwe zam, ezihamba zisuka kwihlabathi liphela ukuze zijonge kwaye zonwabele iKosice!
iyakubonelela ngezimvo ezikhethekileyo zeziko lembali leKošice nazo zonke iimpawu zayo zomhlaba.
Uyilo lomgangatho ophantsi weprojekthi uneendawo zorhwebo zevenkile enkulu, ikhefi kunye nevenkile yokutyela, nto leyo enegalelo kwintuthuzelo enkulu yabahlali.
Xa kuyilwa i-complex yokuhlala i-Rezidencia pri radnici, kugxininiswe ekusetyenzisweni kwezinto ezisemgangathweni ophezulu kunye nobuchwepheshe bezobuchwephesha ngokugxininisa ekusebenzeni kokusingqongileyo. Isiphumo solu mzamo kukuba iflethi yethu ixhotyiswe kumgangatho ophezulu kunye nodidi lwamandla B, nto leyo ebonisa isakhiwo esisebenza ngamandla.
I-HDTV ene-intambo yepremiyamu, izitishi zeTV eziqhelekileyo
Ifulethi lenzelwe abantu abasebenzayo abafuna ukuba neziko lembali yeKošice ngaphakathi kwamanyathelo ambalwa ukusuka kumda wekhaya labo elitsha. Kubantu abafuna ukusebenzisa ngokupheleleyo amandla okuhlala okukumgangatho ophezulu kwiziko kodwa kwangaxeshanye bafumane indawo ezolileyo apho banokuphumla khona emva komsebenzi wemini yonke.
Umbuki zindwendwe ngu- Martin
I am 50 y old allergologist. In my free time I love travelling ESP with my family ( wife and 2 children ).
Iilwimi: Čeština, English, Русский
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Staré Mesto